जान्नुहोस् ! रक्तदान गर्दा फाइदा हुन्छ कि ! बेफाइदा - Samachar PatiSamachar Pati
जान्नुहोस् ! रक्तदान गर्दा फाइदा हुन्छ कि ! बेफाइदा
सरकारले मिर्गौला, क्यान्सर,स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका विरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने
तोरीको तेलको फाइदा, यसको प्रयोग बाट मिल्छ ! यस्ता रोगबाट छुट्कारा